တရုတ်ပန်းရောင်ပုလင်း Bamboo သွားကြားထိုးတံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Longyan
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဝါးထုတ်ကုန်များ > ဝါးသွားကြားထိုးတံများ > ပန်းရောင်ပုလင်း Bamboo သွားကြားထိုးတံ
ပန်းရောင်ပုလင်း Bamboo သွားကြားထိုးတံ: သစ်သားသွားကြားထိုးတံများထက်ဝါးသွားကြားထိုးတံများ၏အားသာချက်မှာဝါးသွားကြားထိုးတံများ၏မာကျောမှုနှင့်ခိုင်မာမှုဖြစ်သည်။ သစ်သားသွားကြားထိုးတံများသည်ကြွပ်ဆတ်ပြီးကျိုးပဲ့လွယ်သည်။ ဝါးသွားကြားထိုးတံများသည်သူတို့၏တိုတောင်းသောကြီးထွားမှုသံသရာနှင့်ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းမှုတို့ကြောင့်သစ်သားသွားကြားထိုးတံများထက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။
ပန်းရောင်ပုလင်း ဝါး သွားကြားထိုးတံ
သစ်သားသွားကြားထိုးတံများထက်ဝါးသွားကြားထိုးတံများ၏အားသာချက်မှာဝါးသွားကြားထိုးတံများ၏မာကျောမှုနှင့်ခိုင်မာမှုဖြစ်သည်။ သစ်သားသွားကြားထိုးတံများသည်ကြွပ်ဆတ်ပြီးကျိုးပဲ့လွယ်သည်။ ဝါးသွားကြားထိုးတံများသည်သူတို့၏တိုတောင်းသောကြီးထွားမှုသံသရာနှင့်ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းမှုတို့ကြောင့်သစ်သားသွားကြားထိုးတံများထက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။
သွားကြားထိုးတံကိုအရည်အသွေးမြင့်ဝါးသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ သွားများကြားမှအစာအကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ရုံသာမကသွားနှင့်ခံတွင်းသွားနှင့်သွားဖုံးများကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သွားကြားထိုးတံကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သွားများကိုကာကွယ်ပေးရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နေ့စဉ်သွားတိုက်တံဖြည့်စွက်စာအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ် LY-TP-၀၂ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း လက်ခံပါ
သတ်မှတ်ချက် ၆.၃ စင်တီမီတာ ပစ္စည်း ဝါး
ငါ့မြေး 200-300pcs/အိုး ထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက် H7.8 စင်တီမီတာ
Toothpick, also known as "chewing Poplar" or "chewing poplar branch" in ancient times. ဝါး toothpick isakind of bamboo product made of high quality bamboo.
သွားကြားထိုးတံများကိုအရည်အသွေးမြင့်ဝါးသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သွားထဲသို့ထည့်ထားသောအစာအကြွင်းအကျန်အပြင် plaque နှင့် scale ကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သွားတိုက်တံများမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်သွားများကိုသန့်ရှင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုသောနေ့စဉ်သွားတိုက်တံကိုဖြည့်စွက်စာအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
hot Tags:: ပန်းရောင်ပုလင်းဝါးသွားကြားထိုးတံ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားဝယ်၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
Mauve Cylinder Bamboo သွားကြားထိုးတံ
သေတ္တာဖောက်ထွင်း Bamboo သွားကြားထိုးတံ